Ifraax Axmed “Deeqo waxay u geeriyootay Dhiig bax markii la guday ka dib” - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Ifraax Axmed “Deeqo waxay u geeriyootay Dhiig bax markii la guday ka dib”
August 20, 2018 admin962
Deeqo Daahir Nuur waxa ay aheyd 10 jir ku dhalatay tuulada layiraahdo OLOL oo 55km u jirta magaalada Dhuusamareeb.
Ifraax Axmed oo ah gabar u ololeeyso arimaha beni’aadan-nimada, xili ay Hay’ada Ifrah Foundation ku jirtay shaqo ama olole ku aadanaa kahortaga gudniinka fircooniga ee Gabdhaha ayaa waxaa dhacday arin aad u naxdin badan taas oo ah gudniin loogestay Gabar lagu magacaabi jiray Deeqa Daahir Nuur oo u dhimatay Dhiigbax iyadoo waqtigaas laguday.
Ifraax Axmed wexey booqosho ku tagtay Tuulada ama baadiyaha lagu guday Deeqo Daahir Nuur waxaa ayna lakulantay Hooyo Fadumo Cusman Cali oo ah Deeqo hooyadeed, waxaa ayna u sheegtay gabadheeda Deeqa ee dhimatay magaceeda runta ah in uu ahaa Xaawo isla markaana iyaga ay ugu yeeri jireen Deeqo.
Ayaan Maxamed Nuur iyo Nasteexo Maxamed Nuur oo ah gabdhihii lala guday Deeqo isla markaana ka badbaaday ayaa iyagu la ilmo adeer ahaa Deeqo.
Sidoo kale Ifraax waxaa ay booqatay Isbitaalkii ay Deeqo ku geeriyootay waxaa ayna wax ka weydiisay gabadhii kalkaaliyada aheyd, waxaa ayna sheegtay xiliga loo keenay gabadhan oo dhiig baxeysay isla markaana caqabada ugu weyn ee ay u geeriyootay ay aheyd dhiig bax.
Sidoo kale waxaa ay Ifraax booqatay qabrigii lagu aasay ee ku yaalay meel udhow magaalada Dhuusamareeb, waxaa ay sidoo kale la kulantay Gabar Deeqo saaxibteed ah oo lagu Magacaacbo Xamdi Maxamed oo ay weydiisay Deeqo aqoonta ay u laheyd, waxaa ayna sheektay Xamdi In ay saaxiibo ahaayeen kana weyneyd oo ay marwalbana ariga isla Ilaalin Jireen lana kulmi jirtay Isbuuci saddax jeer, markii aan weydiiyay Geerida saaxibadeed waxay ii sheegtay in ay aad uga naxday Geerida Deeqa una xiistay.
Sheekh Shaakir Madaxa Xukuumadda Galmudug ayaa mar aan lakulmay waxaa uu yiri: “aad Ayaan uga xumahahy dhimashada Deeqa, waxaana idin kaga mahadcelinayaa sida ad noola qeybsaneysaan xanunka carruurteena yar yar.
Waxaa uuna intaasi kudaray: Dhacdadan kamadhicin Dhuusamreeb waxay kadhacday deganka (LASOLEY) waxaana idinku boorineyna inaad karun sheegtaan sida wax udhaceen iyo mesha ay kadheceenba.
Dhacdooyinka nucan ah inta badan waa dhacan laakiin tan waxaa banaanka keenay waa dhimashada marka waxaan kubaaqeynaa in wacyigalin badan lasameeyo si loo ciribtiro dhaqankan ama caadadan xun.
Sheekh Shaakir waxaa uu sidoo kale yiri: waxaan usaarnay gudi uu hormuud uyahy taliyaha Booliska. Taliyaha Booliska ayaa dhinaciisa waxaa uu sheegay in qofka dambigan geystay in la sooxiro.
War-Murtiyeed: Shirkii Wadatashiga Wasaaradaha Kalluumeysiga
Ciidamada Itoobiya oo isaga baxaya Soomaaliya